भाडाको घरमा ट्राफिक प्रहरी ! - EAAWAJ (इ-आवाज)
भाडाको घरमा ट्राफिक प्रहरी !
१२ पौष, २०७४ । जिल्लाका केही सरकारी कार्यालयले संरचना भाडामा लगाएर वार्षिक लाखौं आम्दानी गर्दै आइरहेका छन् । यसरी संरचना भाँडामा लगाउनेमा जिल्ला समवन्य समिति, मध्यक्षेत्र प्रहरी तालिम केन्द्रलगायत छन् । तर, चितवन ट्राफिक प्रहरी भने वर्षौंदेखि भाडाको घरमा बस्न बाध्य छ ।
आफ्नै भवन नहुँदा चितवन ट्राफिक प्रहरी भरतपुरको दूरसञ्चार रोडमा रहेको अति नै जीर्ण र साँघुरो घर भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
३ वर्षदेखि जीर्ण भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको चितवन ट्राफिक प्रहरी यसअघि १० वर्ष चौविसकोठी नजिकको निजि घर भाडा लिएर बसेको थियो । त्यसभन्दा अघि नारायणी पुलको छेउ पुलचोकमा ‘काठेघर’ मा कार्यालय थियो ।
अहिलको दुई तले भवनको तल्लो तहमा सोधपुछ शाखा, अभिलेख शाखा र कार्यालय प्रमुख कक्ष साँघुरा कोठामा छन् । यस्तै, माथिल्लो तलामा व्यारेक छ । कार्यालय भवन संरचनागत हिसाबले पनि कमजोर देखिन्छ । यसले ट्राफिक प्रहरीको कार्य सम्पादनमा समेत समस्या उत्पन्न गराएको छ ।
बाहिर भाडामा कोठा लिएर बस्नु भनेर कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरुलाई नै भन्नुपर्ने अवस्था आएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सन्तोष पन्तले गुनासो गरे । ‘एकातिर भाडा नै उठाएर खाने सरकारी कार्यालय पनि यही छन्, हामी भाडा तिरेर बस्ने सरकारी निकाय पनि छौं’ प्रमुख पन्तले भने, ‘कैयौंपटक समस्या बिसाउँदा पनि कसैले सुनुवाइ गरेनन् ।’ जिल्लामा एकदर्जन अस्थायी ट्राफिक प्रहरी बीट छन् । जिल्लामा अहिले ४९ जना ट्राफिकको जनशक्ति छ ।
सरकारी कार्यालय भए पनि नेपाल सरकारले जग्गा खरिद र भवन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन नगर्दा विगत लामो समयदेखि ट्राफिक प्रहरी भाडामा बस्न बाध्य भएको हो । कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक पन्तले मासिक १९ हजार ८ सय रूपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको जानकारी दिए
जिससको गेष्ट हाउसमा प्रहरीको आँखा
जिसस चितवनले भाडामा लगाउँदै आएको गेष्ट हाउस भवन उपलब्ध गराउन ट्राफिक प्रहरीले माग गर्दै आएको छ । ट्राफिक प्रहरीले पत्रचार मात्रै होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत दबाब नै दिएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिले सो भवन ‘गंगाराम कलेज’ सञ्चालन गर्न विगत केही वर्षदेखि भाडामा लगाउँदै आएको छ । गंगारामसँगको सम्झौता अवधि सकिए पनि जिससका केही कर्मचारीहरुले सम्झौता अवधि थप गर्दै आएका छन् । गएको साउन ३ गते ट्राफिक प्रहरीले जिससलाई पत्र नै लेखेर सम्झौता अवधि सकिएलगत्तै भवन कार्यायललाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो ।
जिसस चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका लागि भवन वा केही संरचना दिन सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया अनलाइनखबरलाई दिए । ‘विधिवत रुपमा ट्राफिक प्रहरीले म आएपछि माग गरेको जानकारी छैन’, डल्लाकोटीले भने, ‘गंगारामसँगको भाडा सम्झौता सकिएपछि विचार गर्न सकिन्छ ।’
यो वर्ष पनि जिल्ला समन्वय समितिसँग भोग चलनको लागि भए पनि जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पन्तले बताए । ‘भाडा तिरेरै भए पनि सरकारी कार्यालयकै जग्गामा बस्न पाए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पहल भैरहेको छ ।’
विगतमा जिप्रकाको क्वाटर भवन अगाडिको ३ कठ्ठा जग्गामा भवन बनाउने पहल पनि नभएको होइन । गएको वर्ष पुसमा त्यसका लागि अनुमति पाए पनि २ करोड ८० लाख बराबरको लागतमा ३ तले भवन बनाउने कामले सफलता पाउन सकेन । कार्यालयका लागि कम्तिमा पाँच कठ्ठा जग्गा भएमा सहज हुने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । ट्राफिक कार्यालय भवन निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकासँग समेत बजेट विनियोजनका लागि पहल गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पन्तले जानकारी दिए ।
← पर्सामा ३९ जना फरार अभियुक्त पक्राउ
सांसद आइसके तर कर्मचारीको अत्तोपत्तो छैन →